सिन्धुपाल्चोकको छवटा गाउँपालिकाको मतगणना सम्पन्न, कहाँ कस्को जित ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
सिन्धुपाल्चोकको छवटा गाउँपालिकाको मतगणना सम्पन्न, कहाँ कस्को जित ?
मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोकको नौवटा गाउँपालिकामध्ये छवटाको मतगणना सम्पन्न भएको छ । प्राप्त मतपरिणामअनुसार लिसङ्खुपाखर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा (एमाले)का कमलप्रसाद नेपालले दुई हजार ७६१ मत प्राप्त गरी विजयी भएकाछन् ।
उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राजु लामाले दुई हजार ७३१ मत प्राप्त गरे । उपाध्यक्षमा एमालेकै हिमगङ्गा मोक्तानले दुई हजार ८५२ मत प्राप्त गरी विजयी भएकाछन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका खुलम लामाले दुई हजार ४१६ मत प्राप्त गरे ।
यसैगरी पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका टाँसी लामाले तीन हजार ८८५ मत प्राप्त गरी विजयी भएकाछन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राप्रपाका उदय सापकोटाले तीन हजार ३९ मत प्राप्त गरेका छन्।
उपाध्यक्षमा एमालेकै सुनिता अधिकारीले तीन हजार ९३१ मत प्राप्त गरी विजयी भएकाछन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राप्रपाका सविक्षा गुरुङले दुई हजार ६१८ मत प्राप्त गरेकाछन् ।
यस्तै जुगल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका होमनारायण श्रेष्ठले दुई हजार ७१८ मत प्राप्त गरी विजयी भएकाछन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका जयबहादुर लामाले दुई हजार ४९७ मत प्राप्त गगरेका छन् ।
उपाध्यक्षमा एमालेकै सिर्जना तामाङले दुई हजार ७८६ मत प्राप्त गरी विजयी भएकाछन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका अम्बिका नेपालले दुई हजार ३८८ मत प्राप्त गरेका छन्।
यसैगरी बलेफी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका केदारबहादुर खत्रीले तीन हजार २३१ मत प्राप्त गरी विजयी भएकाछन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका गङ्गाबहादुर तामाङले तीन हजार ५७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
उपाध्यक्षमा एमालेकै कमला श्रेष्ठ कायस्थले तीन हजार ३६७ मत प्राप्त गरी विजयी भएकाछन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादी केन्द्रका दुर्गा नेपालले दुई हजार ९३८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै भोटेकोशी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार पौडेलले दुई हजार ५७३ मत प्राप्त गरी विजयी भएकाछन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका साङ्बु शेर्पाले दुई हजार ४२५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकै डाबुटी शेर्पा लामाले दुई हजार ५१० मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका गेल्मु बुढाथोकीले दुई हजार १४६ मत प्राप्त गरेकाछन् ।
यसैगरी हेलम्बु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा काँग्रेसका नीमा ग्याल्जेन शेर्पा चार हजार ९४५ मत प्राप्त गरी विजयी भएकाछन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका हस्तबहादुर पण्डितले तीन हजार २१३ मत प्राप्त गरेकाछन् ।
उपाध्यक्षमा काँग्रेसकै कोपिला पण्डितले चार हजार ५०२ मत प्राप्त गरी विजयी भएकाछन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका नीमा जाङ्मु लामाले तीन हजार ८६ मत प्राप्त गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजेश काफ्लेले जानकारी दिए ।